ကမ္ဘာ့အရှားပါဆုံး သဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးဆင်နှာမောင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့က တွေ့ရ (photo and video) ~ ITmanHOME
00:52 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
ကမ္ဘာ့အရှားပါဆုံး သဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးဆင်နှာမောင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့က တွေ့ရ (photo and video)
ကမ္ဘာ့အရှားပါဆုံး သဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးဆင်နှာမောင်းကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့က တွေ့ရပုံ။ ၁နာရီ ၃၅ကီလိုမီတာနှုန်းလောက်နဲ့ မိနစ်၄၀ကြာ မွှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်တတ်တယ်လို့ ခန့်မှန်း။ ၁၉၂၃ခုနှစ်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံ ကန်တိုမြို့မှာ တိုက်ခတ်သွားဖူးတဲ့ မီးဆင်နှာမောင်းဟာ လူ၃သောင်း၈ထောင်လောက်ကို ၁၅မိနစ်ခန့်အချိန်အတွင်း သေဆုံးစေခဲ့ဖူး။
For 40 minutes,abush fire burning across the Australian Outback swirled inaterrifying and breathtaking column of pure flame. The tornado of fire was caught on camera by Chris Tangey, of Alice Springs Film and Television, who was scouting locations in the area when the firey twister erupted before his eyes! [DailyMail]
Environment News: Fire Tornado Filmed in Hawaii